श्रीमान र ५ वर्षे बच्चाको बि’जोग बनाएर यी श्रीमती फ’रार ! भक्तपुरबाट एकै दिन दुई जना कहाँ भागे ? (हेर्नुस् भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/श्रीमान र ५ वर्षे बच्चाको बि’जोग बनाएर यी श्रीमती फ’रार ! भक्तपुरबाट एकै दिन दुई जना कहाँ भागे ? (हेर्नुस् भिडियो)
आजकाल नेपाली समाजमा विभिन्न घटनाले स्थान पाईरहेका छन् । श्रीमान र बच्चा छोडेर कयौं महिलाहरु अर्कैसँग भागेको घटना अहिले हाम्रो छरछिमेकमा देख्दै र सुन्दै आइरहेका छौँ । भक्तपुरमा पनि एउटा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ। यहि माघ १७ गते देखि शोभा खड्का नाम गरेकी युवती श्रीमान र ५ वर्षे बच्चाको बि’जोग बनाएर लापता छिन् ।
फाईनान्सबाट करिब ५० हजार निकालेर गएकी शोभा यतिका दिनसम्म घर नफर्केपछि उनका भाई दिदीलाई खोजिदिन आग्रह गर्दै मिडियामा आएका छन् । सम्भव भएका र दिदी जान सक्ने सबै ठाउँमा खोजीसकेको तर अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो नलागेको उनले बताए ।
सधै कहीँकतै जाँदा बताएर जाने शोभा यो चोटी केही नभनी जाँदा शंका पैदा भएको बताएका छन् । शोभाका छिमेकीका अनुसार सोहि स्थानबाट एक जना अर्का पुरुष पनि गायब रहेको र सायद दुवै जना भागेको हुनसक्ने लख काटेका छन् । हेर्नुस् अचानक गायब भएकी शोभा र अर्का युवाको बारेमा छिमेकी र भाईले खोलेका कुरा भिडियोमा :